I-Android Training kuPhuhliso novavanyo
I-Android OS (inkqubo yokusebenza) iphuhliswa yi-Google esetyenziswa yi-80% yeefowuni ze-smart kwihlabathi. Kuthetha ukuba kukho ithuba elimangalisayo Android abaphuhlisi bekamva labo elizayo. Ukuba sicinga ukuba isizukulwana esilandelayo se-intanethi (abasebenzisi abangaphezu kwezigidigidi ze-1) banokufikelela kwi-intanethi okokuqala ngethuba. Uphuhliso luyakwazi ukuphuhlisa i-Android zokusebenza ezisebenzayo nezilungeleleneyo eziza kukunika ithuba elihle lokuxhuma kunye nenani labantu abaphendulela kwi-intanethi banceda iifowuni zefowuni ukufumana nayiphi na ulwazi malunga nantoni na xa uhamba okanye uhamba emotweni okanye kwindawo .
Ngethamsanqa abantu abanomdla wokufunda ukuphuhliswa kwesicelo se-Android, kwinkqubo yokuziphendulela kumthengi kubadali, zininzi iindlela zokuziphangela eziza kwenza umsebenzi obalaseleyo wokukunceda ufunde izinto ezisisiseko ze-Android ne-Java. Uyakuqonda kwakhona ukuba uqalise iNkcazo evuyisayo yokuba ngumcebisi we-Android onguchwepheshe.
Ikholeji yoQeqesho lwe-Android yenzelwe abafundi abatsha kwi-android kwaye bafuna ukufunda indlela yokwakha i-Android zokusebenza ezinamandla kwaye bavavanye. Into enhle malunga nokuqeqeshwa kwe-android kukuba awudingi izakhono zobuchwepheshe ekubhaleni ukubhalisisa kwi-course ye-android. Ukuba uyazi indlela yokusebenzisa i-fowuni efanelekileyo ukukhwaza i-intanethi okanye uthumele iipops kunye ne-imeyile kubangani bakho, Kuya kukwanela.
Ukufunda into entsha ulula:
Njengoko uyazi ukuba ukufunda into emitsha akulula ukuba ngaba kuphuhliso lwe app Android / Ukuvavanya okanye ukuyibeka imifanekiso usebenzisa i-Photoshop okanye iCorelDraw. Kufuneka ube nesithakazelo kunye nomdla wokufunda into entsha uze uqhubele phambili ukufezekisa ubuchule kuyo. Iikholeji zee-Android zokuQeqesha nokuTitshala kwi-Android yophuhliso / Ukuvavanya kuya kukunceda uhambe ngeenkqubo zokwenza umsebenzi ophezulu kakhulu we-Android ophakamileyo kwiiparitha zefom kunye nokusebenza.
Ukukhetha isiCwangciso esiPhambili seZiko loQeqesho:
Ekupheleni kwekholeji ye-Android Training, uza kuba nolwazi olwaneleyo ukuphuhlisa kunye novavanyo lwezinto zokusebenza ezilula kodwa ezinamandla onokubelana ngazo nabantu obaziyo. Kubaluleke kakhulu ukukhetha umboneleli wezoqeqesho ngokusesikweni ekubeni kusetyenziswa kuphela izikhungo zokufunda ze-IT ezigunyazisiweyo, ezifana IziCwangciso zeNkcazo zeNnovative, ufumane ubuchule kunye nolwazi olufunekayo kuwe.